अनुहारमा पिम्पल, नेकपामा डिम्पल - Netizen Nepal
अनुहारमा पिम्पल, नेकपामा डिम्पल
in अन्य, नेटिजन मंच, मनोरन्जन, मुख्य समचार, वर्गीकृत, समसामयिक
काठमाडौँ, १६ पुस। आजकाल मलाई भेट्नेहरुले के छ ? सन्चै छौ ? भनेर सोध्दैनन । सोधेका भए त भन्ने थिएँ नि, अरु त ठिकै छ, अनुहारमा पिम्पल आएर तनाव भैरहेको छ। मलाई मेरो समस्या पोख्ने अवसरसमेत दिदैनन मान्छेहरुले।
भेटेपछि उही एउटै प्रश्न तेर्साइहाल्छन, ओ हो अनुहारमा के भएको ?
के भएको भन्ने ? केहि भएकै छैन, त्यहि पिम्पल आएको त हो नि। सबैलाई थाहा छ यो कुरा त। फेरि किन सोधेका ?
घरिघरि त यस्तो सोच पनि आउछ, मेरो चिन्ता लागेर पो सोधेका हुन् कि । फेरि होइन, उनीहरुले यसरी मेरो चासो र चिन्ता किन गर्ने ? चिन्ता र चासो त उनीहरुको गरिन्छ, जसलाई हामी नजिकबाट चिन्छौं र जोसंग निकट हुन्छौं । उनीहरुसंग त मेरो गोरु बेचेको साइनो पनि पर्दैन। मेरो हालखबरको चिन्ता नभएकालाई मेरो अनुहारको के चिन्ता ?
फेरि सोचें, कुनै पनि नातागोता पर्दैन भने पनि मानिससंग नाता जोडिन सक्छ। किनभने मेरो त नाता जोड्ने उमेर पनि भैसकेको छ। त्यतापट्टिबाट पो उनीहरुले मेरो चिन्ता गरे कि। फेरि त्यस्तो नाता पनि जिवनमा एक चोटीमात्रै त जोडिन्छ, त्यो पनि एक जनासंग। मेरो अनुहारको चिन्ता गर्ने त यहाँ हजारौं हुन लागिसके।
साँची यो अनुहारको पिम्पल कसरी आयो ? अनि कसरी जान्छ ? लगभग ६ महिना भयो, मैले मेरा परम मित्र, इस्टमित्र, छरछिमेक, नातागोता पर्ने- नपर्ने, गोरु बेचेका साइनो लाग्ने- नलाग्ने सम्मका मानिसहरुबाट एउटै प्रश्न सुन्न थालेको। ‘ओहो अनुहारमा के आएको?’
उनिहरु प्रश्न पनि यसरी सोध्छन् कि मानौं मैले पिम्पललाई मेरो अनुहारमा केही दिनका लागि आसन ग्रहण गराइदिएर मेरो अनुहारलाई पवित्र बनाईदिनुपर्यो भन्दै बिन्ति बिसाएँ । त्यसपछि ‘निकै नै कर गरि गएर बस्दिउँ न त’ भनेर पिम्पल मेरो गालामा आएर आशन ग्रहण गर्यो । त्यसपछि पिम्पलका शाखा सन्तान र सात पुस्ते नै सिट खाली भएको जति सबैतिर आएर बसोबास गर्न थाले ।
उनिहरुले मेरो अनुहार अतिक्रमण नै गर्न थाले । अब त मोहियानी हक पनि माग्ने हुन् कि । डर पो लाग्न थालेको छ ।
यी सबै मानिसले मेरो समस्या बल्झाई दिएकामात्र छन्। समाधानको उपाय कसैले भन्दैनन। भेट्यो कि प्रश्नमाथि प्रश्न धाराप्रवाह गर्न थालिहाल्छन। उत्तर दिने शब्द नै हुदैन।
‘खै के भयो के भयो एक्कासी आयो।’ मेरो छोटो उत्तर यहि नै हुन्छ।
सफा अनुहार लिएर चटक्क भएर हिड्ने रहर कसलाई हुँदैन र ? फेरि डन्डीफोर, पिम्पल चाहेर या नचाहेर आउने पनि त होइन ? भनेजस्तै हुन्थ्यो भने त यो अनुहारको समस्या कसैलाई पनि नहोस।
सबैभन्दा पहिला झ्वाट्ट हेर्दा हाम्रो आँखा अनुहारमै पुग्छ । अनुहारमा नै अनेक किसिमका समस्या उत्पन्न भएका छन् भने त्यो छिटो नोटिस पनि हुन्छ । शरीरका अन्य भागमा समस्या भएको भए पनि कपडा लगाउँदा छोपिने सम्भावना हुन्थ्यो। अनुहारलाई केले छोप्नु ?
पिम्पल कसरी आयो भनेर अड्कलबाजी पनि मानिसअनुसार फरक फरक हुने रहेछ। कसैले भन्छन, ‘ तिम्रो अनुहार चिल्लो रहेछ । तिमि चिल्लो पिरो धेरै खान्छौं कि क्या हो ? त्यसैले यस्तो भएको।
जबकी मलाई चिल्लो पिरो त्यति सारो मन पर्दैन र खान रुचि पनि देखाउदिन।
अर्काथरिले भन्छन, तिमि पानी कम खान्छौ होला त्यसैले यस्तो भाको।
तर म सानैदेखि पानी अलि बढी पिउंछु। अनुहारमा समस्या आएदेखि झन् बढी पिउछु। शरीरबाट बाढी नै आएर पिम्पल बगाएर लैजाला जसरी पानी पिउदा पनि अनुहारको पिम्पल जादैन त।
अर्काथरिले भन्छन, तिम्रो अनुहारमा फोहोरहरु जम्मा भएर त्यस्तो भएको। धेरै मुख धुने गर। मुख नधोएर, बाहिरको धुलो, धुवाँको कणहरु अनुहारमा जम्मा भएर त्यस्तो हुन्छ।
मेरा लागि यो कुरा पनि गलत नै हो। किनभने म धुलो, धुवाँ र घाममा खासै निस्किन्न र निस्किन छाडेको पनि वर्षौं भैसक्यो। अनुहारमा पिम्पल आउन थालेको त जम्मा ६ महिना भयो।
त्यसो त, धुलो धुवाँबाट नै पिम्पल आएर अनुहार विरुप हुन्छ भने ति ट्राफिक दिदीबहिनीहरुको अनुहार कस्तो हुन्थ्यो होला ? अनुहारमा समस्या हुन थालेपछि, याद हुने रहेछ। यसो त्रिपुरेश्वरमा सिट्टी फुक्दै गरेकी एकजना दिदीको अनुहारमा हेरें। उहाँ त कति राम्री हुनुहुदो रहेछ। उहाँको अनुहारमा एउटा पिम्पल पनि छैन।
फेरि अर्काथरिले यसो पनि भने, तिम्रो अनुहारमा धेरै क्रिम लगाएर यस्तो भएको। अनुहारमा धेरै क्रिम लगाउनु हुँदैन। फेरि दिक्क लाग्यो, म त क्रिम पनि खासै प्रयोग गर्दिन।
मानिसहरुले आआफ्नो हिसाबका प्रतिक्रिया दिन्छन र आफ्नो हिसाबले कारण पनि बताउछन। उनीहरुले भनेका कुनै कारण पनि म संग मेल खादैन।
फेरि आउछन, उपचार पद्धति बताउनेहरु।
पिम्पलले ज्यादै हैरानी दिएको कारण म यस्तो अवस्थामा पुगेको छु कि कसैले मलाई गोबर लगाउदा पिम्पल जान्छ भने भने पनि म अनुहारमा गोबर लगाउन तयार हुनेछु। एकैछिन गन्हाउछ, एकछिन सहेर बस्दा मेरो समस्याको समाधान हुन्छ भने किन नगर्ने ? मेरो मनमा यस्ता सवालहरु समेत उठ्ने गर्छ।
पिम्पल हटाउन मैले नगरेको केहि पनि छैन होला सायद।
एकाथरीले भने, अनुहारमा बेसार पकाएर लगाउ चट् हुन्छ। होला त नि भनेर बेसार लगाएँ। त्यतिबेला केपी बाले पनि बेसार खाएपछि कोरोना छुमन्तर हुन्छ भनेर गफ लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीजस्ताले पनि बेसार खानुपर्छ भनेका छन् । बेसार त निकै नै कडा रहेछ कि भन्ने बिचारले मैले पनि अनुहारमा बेसार लगाउन थालें। त्यतिबेला मेरो अनुहारमा पिम्पल आउन थालेको थियो।
कस्तो संयोग, मेरो अनुहारमा पिम्पल आउन थालेकै बेला नेकपामा पनि डिम्पल पर्न थालेको रहेछ । म बेसारबाट उपचार सुरु गर्न थालें। आज होला कि भन्यो, भोली होला क भन्यो। अनुहार बेसारले पहेंलो चाहिं भयो तर पिम्पल गएन।
यता केपी बाको कुरा सुन्नेहरुले पनि अस्पताल नै नगएर बेसारपानी लगातार खान थालेछन। तातो पिंडालु केहि लागेनछ। बरु कतिजनाको त्यहि कारणले मृत्यु भएकोसम्मका समाचारहरु आउन थाले। अब भएन भनेर मैले बेसार प्रणालीलाई बन्द गरिदिएँ।
केपी बा पनि बेसार छाडेर अयोध्यातिर लागेछन। म पनि भगवानको पुजा आराधना गर्न थालें। तैपनि भगवानले पो हेर्छन कि भन्ने आशाले। मलाई त जे गरे पनि छोला जस्तो लागेन।
समय बित्दै गयो, सत्तामा केपी बाको अवस्था धराप हुन थालेछ । उहाँको कुर्सी नै डगमगाउन थालेछ। यता मेरो अनुहारको अवस्था पनि त्यस्तै हुन थाल्यो। पिम्पल एउटा दुइटा गरेर पुरै अनुहारभरि ढाक्न थाल्यो।
तै पनि मैले हार खाइन, तितेपाती, अमला, कागती, बेसार,घ्युकुमारी, लसुन, अदुवा, सुपारी केकेमात्र लगाइन । लगाईरहें।
म अनुहार बचाउन बेसार प्रयोग गर्थें, केपी बा सत्ता बचाउन बेसार प्रयोग गर्थे।
हुँदा हुँदा मेरो अनुहारको समस्या उत्कर्षमा पुग्यो । हामी सामान्यतया अस्पताल धाइहाल्दैनौं। फेरि अहिले त झन् कोरोना महामारीको समय । सामान्य उपचारका लागि त अस्पताल नधाउनु नै उत्तम हुन्छ । अति नै भएपछी म अस्पताल गएँ।
यता केपी बा पनि अति नै भएपछि, घरि विधायक ल्याउने, घरि विधायक फिर्ता लिने, मनमुटाव गर्ने, छलफल गर्ने, समाधान निकाल्ने, फेरि मनमुटाव गर्ने गर्न थाल्नुभयो। म पनि अस्पताल धाउने, औसधि लगाउने, औसधिले काम नै गर्दैन। फेरि डाक्टरसंग छलफल गर्ने गर्न थालें।
अति भएपछी मैले डाक्टरको औसधि पनि प्रयोग गर्न छाडीदिएँ। यता केपी बाले पनि संसद नै भंग गरिदिएछन । मेरो अनुहार र केपी बाको सत्ताको क्या तालमेल मिलेको। सम्झिएर छक्क परिराछु।
राजनीति जोगाउन त देशी विदेशी शक्तिसमेत नेपालमा आएर उपचार खोजिरहेका छन् । केपी बा कानुनी उपचार भन्दा पनि प्राकृतिक उपचार खोज्ने तिर लाहिरहेका छन् । केपी बाको समस्यामा पो विदेशीले समेत चासो राख्छन, मेरो समस्यामा चासो राख्ने त अब कोहि पनि बचेका छैनन्।
आमालाई चाहिं एउटै पिरलो छ, अब छोरीलाई कसले लैजान्छ ? मलाई राम्री नभै कसैले लैजान्थ्यो भने आमालाई मेरो अनुहारको चिन्ता नै नहुने रहेछ क्यार । तर जे होस्, मेरो अनुहारको यति धेरै चिन्ता मलाई वाहेक कसैलाई पनि छैन । यति कुरा चाहिँ थाहा छ मलाई ।
आजभोलि मेरो हरेक दिनको सुरुवात ऐनाबाट हुन्छ । जुरुक्क उठ्छु, ऐना हेर्छु, आजचाहिं अलि निक‍ो भयो कि । तर छैन, जस्ताको त्यस्तै । अझ बढि भएको जस्तो लाग्ने । म त्य‍ो दिनको आशामा छु, जुन दिन म उठ्दा मेरो अनुहार पहिलेको जस्तै सफा र राम्रो होस् ।
म अनुहारको समस्या समाधानका लागि जति कन्सिएस भएँ, नेताहरु जनताका समस्यामा त्यति कन्सिएस भएको जस्तो चाहिं लाग्दैन। तर जे होस्, अझैसम्म पनि हामी दुबैको समस्याचाहिं समाधान भएको छैन।
अब नेकपा र केपी बाको अवस्था चाहिं के हुन्छ होला ?
कि मेरो अनुहारको समस्या नहटेसम्म उनीहरुका बिचमा पनि समस्या आइरहने हो ?
Tags: डिम्पलपरिधीपार्वती अधिकारीपिम्पल